Dhwr arimood ayaa keenay in ay wado khalad ah maraan.
1- Huguri ( greed ) waxay gacanta ku dhigeen ilihii dhaqaalaha si buuxdana ula wareegeen.
2-Awood (power)waxay kaloo lawareegeen awoodii Gobolka in ay ayagu qofkay rabaan magcawdaan iyadoo aan la eegin aqoonta iyo khibrada qofkaas,kii ay rabaana eryaan markay dantooda ku fushadeen .
3-Kala qaybi oo xukun waxay ka faaiideesteen barnaamijkii four point five (4.5) waxay ku guulesteen in ay bulshada kala qaybiyaan jiifafka qabiiladana dhaqaale ku kaxaystaan si ay u wasaqeeyaan sharaftooda ,taasina waxay keentay in koox yar oo isku qabiil ah iyo kuwa ay wadan karaan oo dabadhilif ah ay gacanta ku dhigaan awooda Gobolka .
Xageey aadeen Dawladii ama shicibkii masuuliyiitan keenay oo masuulka ka ahaa ee shaqadan u idmaday ama u dhiibtay. Gumeestihii ayaa wxuu inoo keenay falsafad ah qaybi burburi xoogooda si aad u xukunto waxaa Africa looga tegay laba arimood oo ah
A- QABIIL loo isticmaalay (Qabyaalad),B- DIINTA, oo ahayd (Muslim iyo Masiixi) labadaasina waxay noqdeen dhaxalka qaran dumiska Africa,hadaba Somaaliya waxaa looga tegay oo dhaxal u noqtay waa Qabiil ku salaysan qabyaalad macnaheedu yahay reer hebel baa tahay ee reer hebel iska ilaali Ingriisku wuxuu adeegsan jiray jiifis ama jiifaf(chiefs) iyadoo taa laga faaiidaysanayo ayaa maanta waxaa ina ku soo biiray firqado kala aragti duwan oo ka yimi dhinaca diinta ,shicbkii awooda lahaa waxuu noqday in culimada ,Aqoonyahanada,dhalinyarada ,Rag iyo haween lakala qaybiyo si ay danahooda boobka hantida umada ah u fushadaan .
Waxaa kaloo la waayey Dawlad dhexe oo awood leh oo ku fulisa sharciga ay jebiyeen ,sidaa darteed madaxa dawlad goboleedka waxay noqdeen dhurwaayo hortaagan horumarka dalkooda iyo dadkooda Waa calooshooda u shaqaystayaal dad iyo daltoona aan dan ka lahayn, Shicibkii masuulka ka ahaana waxaa laga dhigay bisado ku dagaalma cadka ciida loogu tuuro kii miyoow yiraahdana ama dhurwaa isu ekaysiiya waxaa loo tuuraa cad quudheed markaasu amusaa oo Bisadihiisii dib ugu noqdaa.
← Waa Qaran Dadqalatooyin u gacan galay Madaxweyne Jahmhuuriyadda oo dhambaallo tacsi ah ka helay qaar ka mid ah dalalka Caalamka →